Khariidadaha Apple waxay ku darayaan tilmaamaha haadka 5 waddan oo kale | Waxaan ka socdaa mac
Kadib markaan arkay gawaarida qaar Khariidadaha Apple oo dul wareegaya Portugal, Spain, Croatia iyo Sardinia, shirkadda Cupertino waxay sii wadaa inay ka shaqeyso hagaajinta barnaamijka iyo tilmaamaheeda. Xaaladdan oo kale, waxay ku saabsan tahay ku darista tilmaamaha haadka socdaalka hadda ku jira Khariidadaha Apple.
Tani, oo horeyba looga heli jiray wadamada qaar, lagama helin illaa iyo hadda Australia, Kanada, Faransiiska, Jarmalka iyo Boqortooyada Ingiriiska, laakiin Apple ayaa hadda hirgelisay. In sidan ku biir Mareykanka iyo Shiinaha hagaajinta socodka marka Khariidadaha Apple ay tahay inay na siiyaan tilmaamaha marinka.
Waxaa suurtagal ah in basaska Apple ay sii wadaan inay sawiraan khariidadaha waddooyinka adduunka oo dhan iyadoo tanina ay dhacayso isla waqtigaas, macluumaadka isku midka ah ayaa la sii cusbooneysiinayaa iyadoo lagu darayo macluumaadka ku saabsan gaadiidka dadweynaha ama sida ay tahay macluumaadka ku jira shaashadda ku saabsan haadka inay tahay inaan qaadno si aan u sii wadno wadadeena. Faahfaahin kale oo muhiim ah ayaa ah in la ogaado xawaaraha waddooyinka aad ku socoto oo tan hadda waxaa laga heli karaa oo keliya Mareykanka iyo Boqortooyada Midowday, markaa in kasta oo ay run tahay inay si weyn u wanaajiyeen arjiga, haddana weli shaqo badan ayaa u taal samee.
Tani waxay umuuqataa inay doqon u tahay isticmaaleyaal badan, laakiin maahan. Ogaanshaha xadka wadada ama saadaalinta isgoysyada laynka waa muhiim marka aan wadno baabuur sida iska cad waxaa lagama maarmaan ah in si cad loo cadeeyo haadka bixitaanka ka hor inta aan la gaarin si loo helo waqti falcelin ah iyadoo aan la is hortaagin taraafikada. Tani waa tan noo oggolaaneysa inaan ku darno macluumaadka haadka khariidadaha Apple, hada sug inay gaarto wadamada kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Khariidadaha Apple waxay ku darayaan tilmaamaha haadka 5 waddan oo kale
Xatooyo-caddeyn ah iMac Pro oo had iyo jeer-on GPS raadraaca?
iMac Pro Airpower, oo wax walba isugu keenaya hal aalad